Uses for Vinegar ဗနီဂါအသုံးပြုနည်းများ - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
1. Freshen up the fridge ရေခဲသေတ္တာသန့်ရှင်းရေး
2. Brighten coffee cups and teacups ကော်ဖီခွက်၊ လက်ဖက်ရည်ခွက်သန့်ရှင်းရေး
3. Eliminate odors အနံ့အသက်ပျောက်စေရန်
4. Kill bathroom germs ရေချိုခန်းပိုးသန့်ရန် (အပြင်းစားသုံးပါ)
5. Saveagarment အဝတ်စအစွန်းအထင်းချွတ်ရန်
6. Tidy upatoilet ရေအိမ်သာသန့်ရှင်းရန်
7. Lose the carpet stain ကော်ဇောအစွန်းချွတ်ရန် (ဗနီဂါ လက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်း + ဆော်ဒါ တခွက်၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံရော)
8. Renew paint brushes ဆေးသုတ်စုတ်တံဆေးရန် (တနာရီစိမ်ထားပါ)
9. Wipe offadirty faucet ရေပိုက်ခေါင်းသန့်ရှင်းရန်
10. Stop static cling စေးကပ်နေတာတွေခွါရန်
11. Make old socks look new ခြေအိတ်အသစ်လိုထင်စေရန်
12. Restore handbags and shoes လက်ကိုင်အိတ်နှင့် ရှူးဖိနပ်အရောင်ပြန်ထွက်စေရန်
13. Banish weeds ပေါင်းမြက်ရှင်းရန်
14. Liven droopy flowers ဘုရားပန်ရေလောင်းရန် (ပန်းအရွက်ညှိုးလာတာကို လွှင့်အပြစ်ပဲ ဗနီဂါ လက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်း + သကြား ၁ ဇွန်း + ရေတကွာတရောပြီး ပန်းအိုထဲရေလောင်ပါ။)
15. Put an end to itching ခြင်၊ အင်းဆက်ကိုက်လို့ယားတာသက်သာစေရန်
16. Whiten your teeth သွားတိုက်တံကို ဗနီဂါထဲစိမ်ပြီး တပတ်တကြိမ်တိုက်ပါ ခံတွင်းနံ့ကောင်းစေတယ်။
17. Make nail polish last longer လက်သည်းဆိုးဆေးတာရှည်ခံစေရန်
18. Keep car windows frost-free ကားမှန်တွေ ရေခဲတာကနေကာကွယ်ရန်
19. Let your dog shine ခွေးမွှေး ခွေးသန်းရှင်းရန်
20. Battle litter-box odor အမှိုက်ပုံးအနံ့သက်သာစေရန်
21. Kill bacteria in meat အသားထဲကဗက်တီးရီးယားတွေရှင်းရန် (ဗနီဂါတခွက်ရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ + အသား ၂ ပေါင်၊ ၂ဝ မိနစ်ကနေ ၂၄ နာရီထားပါ။)
22. Prevent cracked eggs ကြက်ဥအကျက်ပြုလျှင်မကွဲစေရန် ဗနီဂါ လက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်းထည့်ပါ။
23. Steam awayamicrowave mess မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် သန့်ရှင်းရန် ဗနီဂါနဲ့ ရေနွေးဆတူရော ပန်းကန်တခုထဲထည့်ပြီး မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ထဲမှာ ၅ မိနစ်ထားပါ။
24. Repair DVDs ဟောင်းနေတာတွေကိုပြင်ရန် ဗနီဂါဆွတ်ထားတဲ့အဝတ်စနုနုလေးနဲ့ ပါးပါးသုတ်ပေးပါ။
25. Get those last drops ညှစ်ထုတ်ရတဲ့ ငရုပ်ဆီစတာ မထွက်ရင်ဗနီဂါထဲ ဗူးအဝခဏစိမ်ထားပါ။
26. Rinse fruits and vegetables သစ်သီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဆေးရန် ဗနီဂါ လက်ဖက်ရည် ၂ ဇွန်း + ရေတပိုင့် ရောပြီးသုံးပါ။ ပြီးရင် ရေနဲ့ထပ်ဆေးပါ။ ပိုးသတ်ဆေးတွေရှင်းမယ်။
27. Brighter Easter eggs အီစတာကြက်ဥ အလှတန်းဆာမဆင်မီ ဗနီဂါ လက်ဖက်ရည် ၁ ဇွန်း + ရေနွေးခွက်တဝက် ရောပြီး အရောင်ခြယ်ပါ။ အရာင်ပိုတောက်ပမယ်။
28. Loosenarusted screw ဖြုတ်မရတဲ့ဝက်အူဖြုတ်ရန်
29. Remove gum ပီကေ၊ ခြူးယင်းဂမ်းခွါရန်
30. Keep cheese from molding ဒိန်ခဲ ထိန်းသိမ်းရန် ဗနီဂါစိုတဲ့အဝတ်နဲ့ပတ်၊ လေလုံတာထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲထားပါ။
31. Renewaloofah ဆေးကြောရာသုံးတဲ့ရေမြှုပ်လိုပစ္စည်းသစ်စေရန် ဗနီဂါနဲ့ ရေဆတူရောထာထဲမှာ ၂၄ နာရီစိမ်ထားပါ။
32. Remove wax မလိုတဲ့နေရာတွေမှာ ကပ်နေတဲ့ဖယောင်းတွေရှင်းပြစ်ရန်
33. Takearelaxing bath ရေးချိုးရာဇိမ်ကျရန် ဗနီဂါ ခွက်တဝက်ကို ရေနွေးနဲ့ရောသုံးပါ။ သေနေတဲ့အရေပြားဆဲလ်တွေ ရှင်းပေးမယ်။
34. Brighten your hair ဆံပင်အရောက်ထွက်စေရန် တလတကြိမ် ဗနီဂါ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဝက်နဲ့လျှော်ပါ။
35. Freshen fabrics အဝတ်၊ ကော်ဇော၊ ရှူး စတာတွေကို ဖြန်းဆေးပုလင်းခွံတခုထဲ ဗနီဂါထည့်ပြီး ဖြန်းပါ။ အနံ့ကောင်းစေမယ်။
36. Erase crayon အိမ်နံရံမှာ ဖယောင်းရောင်စုံတံနဲ့ ပုံတွေဆွဲထားတာဖျက်ရန် သွားတိုက်တံဟောင်းတချောင်းကို ဗနီဂါဆွတ်ပြီးဖျက်ပါ။
37. Sticky stickers ကပ်ခွါကော်ရှင်းရန်
38. Clean the dishwasher and coffee pot ပန်းကန်ဆေးစက်၊ ကော်ဖီစက်သန့်ရှင်းရန် ဗနီဂါ ခွက်တဝက်နဲ့ တလတကြိမ်ဆေးပါ။
39. Sanitize pet accidents အိမ်မွေးအကောင်နဲ့ မတော်တဆထိတာကို သန့်စေရန် ဗနီဂါ ခွက် ၄ ပုံ ၁ ပုံနဲ့ ရေ တကွာတရောသုံးပါ။
40. Prep for summer grilling အသားကင်မီးဖိုသန့်ရှင်းရန်
41. Clean your scissors ကပ်ကြေးသန့်ရှင်းရန်
43. Unclog drains ရေးစီးပိုက်ဆို့နေတာရှင်းလင်းရန် မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ တခွက်လောင်းထည့်ပြီး ဗနီဂါတခွက် ဆက်လောင်းပါ။
44. Eliminate dandruff ခေါင်းဗောက်ရှင်းရန် တပတ်တကြိမ် apple cider vinegar နဲ့ဆေးပါ။ ၁၅ မိနစ်ကြာရင် ရေနဲ့ဆေးပါ။
45. Soften your feet ခြေထောက်ကွဲတာ အသားမာနေတာပျော့စေရန် ဗနီဂါ ၁ ဆ + ရေ ၂ ဆရောတာထဲမှာ မိနစ် ၂ဝ ကြာစိမ်ထားပါ။